Home Wararka Sacid Deni oo doonayo in uu damiyo kacdoonka beelaha degan Mudug
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu u safro magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. Madaxweyne Deni, oo weli ku maqan safar dibadda ah, ayaa la filava in uu dib ugu soo laabto dalka, gaar ahaanna magaalada Gaalkacyo.
Beelaha degan Gobolka Mudug ayaa ka soo horjeestay qorshaha Sacid Deni uu ku doonayo in uu ku maamulo kuna dhaco kuraasta doorashada Puntland. Waxaana degaanka Mudug ka socda kacdoon keeni doona in Saciid Deni uu dhib badan kala kulmo dhaqanka iyo aqoonyahanada reer Galmudug. Si uu arintaan u dajiyo ayuuna uu tagayaa deegankaas.
Beelaha degan Mudug ayaa la filayaa in ay dhawaan shir ku qabtaan Galkacyo kaas oo looga soo horjeedo Sacid Deni in Qorshahiisa. Ma aha kaliya in shirkaas ay qayb ka noqon doonaan beesha Cumar Maxamuud waxaase sidoo kale ka soo qaybgali doono beelaha Leylkase iyo Carab Maxamuud Saalax iyo beesha Awrtable.
Dhanka kale, Madaxweynaha sida warar ku sheegayaan, inta uu Gaalkacyo ku suganyahay wuxu xarigga ka jari doonaa garoonka kubadda Cagta ee Cawaale Studium. Sidoo kale, wuxu kulamo kala duwan la qaadan doonaa odayaasha dhaqanka iyo bulshada Gaalkacyo. Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale la filayaa in uu booqdo dhismaha dekedda magaalada Gacarad oo meel geba-gabo ah maraysa.